हर्पेटिक एनाना एक तीव्र वायरल-प्रेरित प्रेरित प्रायः बीमारी हो, जुन बच्चाहरु मा सामान्य छ।
हेपेटिक टन्सिलाइटिस - लक्षण
सामान्यतया शिशुहरूले मुखमा अल्सरहरू, गहिरो घाँटीको गला र उच्च बुखारको शिकायत गर्छन्। घाँटीहरू विकास गर्दै (भित्ताहरू, अल्सरहरू) गहिराइ र तालको पछाडि मुख्यतया देखा पर्दछ, दुखाइको कारण। प्रायः यसको कारण बच्चाले खाना खाने इन्कार गरे, जुन बच्चाको शरीरको निर्जलीकरण हुन सक्छ। गर्दनमा लिम्फ नोडहरू बढाउन पनि सम्भव छ।
हड्डीको घोर गलेको कारण
यो रोगले कोक्सस्की भाइरस प्रहार गर्दछ। यी भाइरसहरू प्रायः सबै ठाउँमा पाइन्छ, त्यसैले तिनीहरू बच्चाको साथ संक्रमित हुनका लागि धेरै सजिलो हुनेछ, विशेष गरी मानिसहरूको ठूलो भीड। अक्सर, संक्रमण हात, गन्दा पानी, अशुद्ध खाना, हवाई र संपर्क मार्फत हुन्छ। एक हेपेटिक गले गलाउने एक ठूलो खतरा बच्चाहरु र बच्चाहरु लाई तीन वर्ष सम्म अपर्याप्त छ, तर साना स्कुली बच्चाहरु र किशोरीहरु मा रोग को संभावना बाहिर छैन।
हर्पले बच्चाहरु मा गले लगाए
सबैभन्दा पहिला, हामी यो नोट छ कि यस रोग को संक्रामक छ, र बच्चा को जरूर साथीहरु र परिवार को सदस्यहरु देखि अलग हुनु पर्छ।
एक नियमको रूपमा, रोगको उपचार लक्षण हो। एलर्जी प्रतिक्रियालाई हटाउन, एन्टिस्टामिनहरू निर्धारित गरिएको छ, जस्तै क्लोरीटिन , अट्रास्टिन, डियाजिओलिन र अरु। तापमान कम गर्न antipyretic एजेन्टहरूमा योगदान योगदान: ibuprofen , efferagan, acetaminophen र अन्य। एनेस्थेसिया को लागि, तपाईं लिडोसिन को समाधान को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जो संक्रमण को प्रसार को बाधा को रूप मा पनि कार्य गर्दछ।
बच्चाको कोठा राम्रोसँग हाइड्रेटेड हुनुपर्छ। बच्चालाई खाने र पिउन धेरै चाहिन्छ। उपचारमा हेपेटिक एनानाका लागि एन्टीबायोटिक्स कुनै पनि भूमिका खेल्दैन, त्यसैले तिनीहरूको स्वागत बिल्कुल आवश्यक छैन।
सबै औषधिहरू सहभागी चिकित्सकसँग सहमत हुनुपर्दछ, किनकि साइड इफेक्ट र चुनिंदा ड्रग्सको असंगतताबाट बच्नको लागि।
बच्चाको मूत्रमा सेतो रक्त कोशिका बढ्यो
बालबालिकामा फ्लूबाट कसरी बच्न सुरक्षित राख्नुहुन्छ?
बच्चाहरु मा प्रतिक्रियाशील प्यान्रेreatreatitis
बच्चा मा नाक देखि रक्त
बच्चाहरु मा rhinitis -2वर्ष
बच्चामा सुक्खा पखाल्ने खुट्टा कस्तो लाग्छ?
एक बच्चा आफैलाई टाउकोमा हिंड्छ
ARVI - बच्चाहरु मा लक्षण र उपचार, फ्लू से संबंधित ठंड को मुख्य लक्षण
Nurofen - बच्चाहरु को लागि सिरप
बच्चाहरु मा मल को अनियमितता
बच्चाहरु मा ब्रोंकाइटिस को उपचार
Klinefelter को सिंड्रोम - के केटाहरु को आमाबाबु को लागी हेर्न को लागी?
घरमा हट कुकुर
खिंचाव छतको कमजोरी
प्लामेरिया - बीउबाट बढ्दै
कफी कार्लो पासोलिनी
पृथ्वीको सतहमा 12 आकर्षक छेदहरू
लिभरको सिरोसिसको साथ पोर्टल हाइपरटेन्सन
रजोनिवृत्ति कति लामो भयो?
जाडोको लागि पानाको लागि फिर्ती
कुन चलचित्र किशोरी हेर्नु हुन्छ?
ह्यूग जैकमनकी पत्नीले उनलाई प्रीमीयरमा सुत्न थाले
कतिपय प्रयास बिना स्ट्याम्प अप्ठ्यारो पार्छ?
मरिशसको पूर्वी तट
प्यारी जिम कार्री को आत्महत्या को नयाँ विवरण
Prunes संग Krucheniki
गर्भको रेटिनल सिस्टहरू
सेतो जूता - के गर्ने र कसरी फैशनेबल चित्र सिर्जना गर्ने?
एक चिन्ह - स्टर्क हेर्न